Waa'ee Hayyu duree ABO Daawud Ibsaa kana beektuu? - BBC News Afaan Oromoo
Daawud Ibsaa Ayyaanaa bara 1999 irraa hanga tibbana karaa nagaa qabsoo gaggeessuf mootummaarra waamicha dhiyaateef simatanii gara biyyaatti deebi'anitti hayyuu duree ABO tahuun tajaajilaa turan.
Jeneral Wiinget keessattis barataa cimaa akka turan hiriyyaansaanii Mana barumsaa Wiingetii eegaluun hanga qabsoo hidhannootti waliin turan Dr. Dagafaa Abdiisaa Tuuchoo BBC'tti himaniiru.
Bara 1974-1976tti ammo duula 'Idget be hibret'jedhamutti makamuun hawwaasa tajaajilaa tureera.
As keessatti baratoonni Yuunivarsiitii Oromoo hedduun hirmaataa akka turan Dr. Dagafaan BBC'tti himaniiru.
Bara 1977 akka duula 'Idget be hibret' irraa deebi'een Daawud miseensa Koree Giddu Galeessaa ABO tahuun filataman.
Akkuma mana hidharraa bahaniin bara 1979 -1980tti gara Yuunivarsiitii Finfinneetti deebi'uun barnoota Istaatiksii itti fufe.
Leenjii waraanaa boodas gara lixa Oromiyaa Wallaggaatti deebi'uun qabsoo itti fufan.
Bara 1981 ji'oota muraasaaf gara Eertiraa deemuun leenjii waraanaa dabalataa fudhatanii ajajaa waraanaa ABO lixaa tahuun qabsoo hidhannoo mootummaa Dargii irratti jalqaban itti fufan.
Namootni torba bakkuma tokkotti yerooma sana yommuu du'an, isaan baala waanuma arge nyaatanii dabalataan namootni bishaan obaasuun akka lubbuun oolan Obbo Daawud BBC'tti himaniiru.
Booda erga wal dhabdeen bara mootummaa ce'umsaa uumamee ammas gara qabsoo hidhannootti deebi'uun Eertira buufata waraanaa godhachuun qabsoo itti fufan.
Bara 1999 Hayyu Duree ABO tahuun filamuun hanga guyyaa karaa nagaa jilasaanii guutuu waliin biyyatti deebi'anitti hidhannoodhaan qabsoo gaggeessaa turaniiru.
Fulbaana 15 bara 2018 jilli ABO guutuun biyya alaa jiru gara biyyaatti deebi'uun uummata miiliyoonotaan simannaan tasifameeraaf.
Jilli Obbo Lammaa Magarsaan durfamu ABO waliin mari'achuuf Ertiraatti qajeele
''Guyyoota dhufan keessatti jilli ABO biyyatti gala''
Dhoyinsi guddaan magaala guddoo Eertiraa Asmaraatti dhaga'ame
Jecha fiixee arraba keenyaarra jiru maaf yaadachuu dadhabna?